Hooyada dhashay wiilkii ku dhuuntay taayarka diyaaradda oo iyadoo ooyneysa hadashay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Addis Ababa – Mareeg.com: Hooyadda dhashay wiil 16 jir Somali ah, oo sheeg diyaaradeed ku safray inta u dhaxeysa gobolada California iyo Hawaii ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in wiilkeeda uu aabihii ugu sheekeeyay in hooyadii ay kol hore dhimatay.
Hooyadan oo lagu magacaabo Ubax Maxamed Cabdullahi, islamarkaana wareysi siisay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegtay in markii wiilkeedu ogaaday iney nooshahay uu ka kacay falka halista ah ee ah inuu ku dhuunto sheegaga diyaaradda, taasoo muddo 5 saac ah u kala duuleysay California iyo Hawaii oo dalka Maraykanka ka wada tirsan.
“Aniga ayaa dhalay wiilkaas oo lagu magacaabo Yaxye Cabdi, waxaa sanado ka hor la geeyay Mareykanka, waxaana looga sheegay in hooyadiis ay dhimatay, balse markii uu ogaaday inaan noolahay oo aan Afrika joogo ayuu naftiisa qatar geliyay, diyaarad lugaheeda uu soo hoos galay” ayay tiri Ubax Maxamed oo ku nool xerada qaxootiga Sheed-dheer ee dalka Itoobiya.
Hooyada dhashay Yaxye, oo murugo laga dareemayey ayaa sheegtay in aabaha wiilka dhalay uu magac bedeshay, uuna la baxay magaca C/llaahi Yuusuf, balse horay loo oranjiray C/raxmaan.
Ubax oo ooyneysa ayaa dadka Soomaaliyeed iyo ciddii kale ee ay khuseyso arrintaan ka codsatay iney ku gacan siiyaan sidii ay u arki laheyd wiilkeeda.
“Dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay gacan ka geystaan sidii aan isku arki laheyn wiilkeyga, marar badan ayaa isku dayay inaan la xiriiro, markii Mareykanka la geeyay, waa la ii diiday”ayay tiri hooyo Ubax oo ooyneysay markii ay la hadleysay BBC.
Aabaha dhalay wiilkan oo lagu magacaabo C/llaahi Yuusuf oo horay wareysi laanta afka Soomaaliya ee VOA ayaa sheegay in wiilka ay waayeen habeenkii Jimcihii lasoo dhaafay ee sabtidu soo galeysya.
Ninkaan ayaa sheegay in markii dambe uu warbaahinta ka maqlay in wiilkiisu uu ku dhuuntay diyaarad isaga kala gooshayay California iyo Hawaii.
C/llaahi Yuusuf ayaa u sheegay VOA inuu u maleynayo in sababta arrintaas halista ah wiilka ku kaliftay ay tahay isagoo doonayey inuu u tago ayeeyadiis iyo awoowihiis ku sugan Afrika.
Wiilkan lagu magacaabo Yaxye Abdi ayaa axaddii lasoo dhaafay kazoo booday halka diyaaraddu sheegagag ku laabto marka ay duusho, kadib markii uu halkaas ku jiray muddo 5 saacadood ka badan oo diyaaraddaasi u kala goosheysay California iyo Hawaii oo dalka Maraykanka.
Labo maalmood kadib ayaa la ogaaday in wiilkani yahay Soomaali, wuxuuna booliska u sheegay inuu doonayey inuu u tago hooyadiis oo ku sugan Afrika.
Tan iyo sanadkii 1947, waxaa sidaan oo kale ku dhuuntay halka diyaaraduu sheegaga ku laabato ilaa 105 qof, waxaana badbaaday 25 ka mid ah, halka inta kale ay dhinteen.